Paulo Dybala Oo U Furan Inuu U Dhaqaaqo Premier League Xilli Lala Xiriirinayo Arsenal
HomeWararka CiyaarahaPaulo Dybala oo u furan inuu u dhaqaaqo Premier League xilli lala xiriirinayo Arsenal
April 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Paulo Dybala ayaa lagu soo waramayaa inuu u furan yahay u dhaqaaqista Premier League xagaagan, iyadoo lala xiriirinayo Arsenal .
28-sano jirkaan ayaa qarka u saaran inuu ka tago Juventus marka uu qandaraaskiisu dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu haatan xor u yahay inuu heshiis hordhac ah la galo kooxo ajnabi ah.
Arsenal ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo la rumeysan yahay inay xiiseynayaan saxiixa Dybala, iyadoo hal warbixin ay sheegeyso in labada tababare ee Mikel Arteta iyo agaasimaha farsamada Edu ay si weyn u doonayaan xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina inuu u dhaqaaqo Emirates Stadium.
Sida laga soo xigtay Corriere dello Sport , iyada oo loo marayo Daily Mirror , Dybala waxa uu doonayaa in uu soo afjaro 10-kii sano ee uu joogay Italy oo uu isku tijaabiyo horyaal cusub, isaga oo u wareegaya Premier League si uu u tixgeliyo weeraryahanka xagaagan.
Arsenal ayaa isha ku haysa xoojinta weerarka, ka dib bixitaankii Pierre Emerick Aubameyang ee Barcelona bishii Janaayo , halka mustaqbalka Alexandre Lacazette iyo Eddie Nketiah uu yahay mid aan la hubin, iyadoo labada weeraryahan uu qandaraaskiisu dhacayo bisha June.
Dybala, oo dhaliyay 113 gool, islamarkaana caawiyay 48 gool 284 kulan oo uu u saftay Juve tartamada oo dhan, ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxaha Waqooyiga London ka dhisan ee Tottenham Hotspur , Chelsea , Liverpool , Manchester City iyo Manchester United , iyo sidoo kale kooxda La Liga ka dhisan ee Barcelona.